Gbasara Anyị - Anping County Hangtong Wiremesh Co., Ltd.
ANPING COUNTY HANGTONG WIREMESH CO., LTD nwere ọkachamara na mmepụta,
na ịhazi, nyocha na ịzụlite maka ngwaahịa ntanetị waya. Foundedlọ ọrụ anyị hibere na 1996, karịa afọ 20, HANGTONG ghọrọ akara ama ama na ụlọ ọrụ ntanetị waya. Site na ntachi obi anyi mgbe niile site na njikwa uche na teknụzụ na njikwa, Anyị na-agbaso nduzi na ngalaba a.
Ogige nchekwa dị elu (358), feneten ụzọ ụzọ, okporo ụzọ ụgbọ elu, ebe a na-anya ọdụ ụgbọ elu, ebe a na-egwu egwuregwu, ogige insulation, nsu, ogige Palisade, paịlị ube.
Barbed Waya Series
Razor waya, Electrophoretic paint reor waya, Barbed waya, Electrophoretic agba barbed waya.
Oge Nwa Oge
Ogige nkenke nke Australia, onodu odi nma nke Canada, Chain jikọtara obere oge, Ntụrụndụ oge, Oge mgbochi na ihe ndị ọzọ.
Ngwurugwu olu, Hexagonal waya ntupu, igbe Gabion, welded izipu waya, igwe anaghị agba nchara.
Ugbo Fence Series
Ogwe Ehi, ogige atụrụ, ogige inyinya, wdg.
Eriri galvanized dị ọkụ, waya Galvanized, waya Annealed, waya ịkpụ na ihe ndị ọzọ.
A. Anyị nwere usoro njikwa dị elu, ISO9001: 2008 na njikwa asambodo CE nwere ike ime ka onye ahịa anyị nwee afọ ojuju na ngwaahịa kachasị mma.
B. companylọ ọrụ anyị nwere akụrụngwa dị mma: Elu igwe na-emepụta ihe dị elu, Powder na-acha uhie uhie maka akara anticorrosive, akara mkpuchi PVC na-ekpo ọkụ, ọgụgụ isi nnukwu welded waya mesh igwe, akpaka oyi na-akpụ mpempe igwe iji mepụta ngere, yana nwee igwe na-akụ. , igwe na-acha bọọlụ maka nchara dị ọcha, igwe plastik ntụtụ maka ụdị ngwa niile nke nsu, na ụdị igwe ntanetị ntanetị.
C. Banyere akụrụngwa anyị niile nyere iwu site na ụlọ ọrụ a ma ama, Steel si SHOUGANG, BAOSTEEL.Powder si AKZONOBEL na DuPont, ihe mkpuchi mkpuchi nke Electrophoretic sitere na NIPPON.Tụ maka ngwa ahịa a, iji hụ na ngwaahịa dị elu anyị dị elu.
D. Anyị nwere ụlọ ọrụ ngalaba maka ịbịaru waya, nke a na-eji galvanized, nke nwere ike ịchịkwa dayameta izizi na ogo dị mma.
E. companylọ ọrụ anyị nwere ihe karịrị iri n ’ndị injinia dị elu. Nwere ikike zuru ezu maka R&D na imewe ngwaahịa anyị site na anyị. Ya bụrụ na anyị na-ejide ndị mmadụ na ọrụ a.
F. E nwere ndị ọrụ mgbago ọrụ karịrị 100 dị mma. Iji hụ na anyị kacha mma ngwaahịa na ọrụ kacha mma.
Nkà na ụzụ ọhụụ
Otu ndi injin anyị emeela nchọpụta nke teknụzụ ọhụụ electrophoretic na ngwaahịa ntanetị waya n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Firstly ngwa na izipu ntupu ulo oru na omenala kpo oku galvanized. Ma nweta patent (No.ZL201220274870.4), wepụrụ nsogbu nhụsianya nke nchara na ịkpụ ngalaba. Teknụzụ a nwere akara ala dị na ụlọ ọrụ ntanetị ntanetị.
Hangtong site na ntọala edebebere ịnụ ọkụ n'obi na ịkọwapụta ahịa dịka mmụọ nke mmepe. Nke ahụ dabere na ngalaba nke mmepe na ngalaba azụmaahịa. Ebe ọ bụ na 1997, ngwaahịa Hangtong na-ewere oke nke ahịa mba ụwa. Enwere akwa mmanụ ọla buru ibu na-ebupụ Europe, America, Australia, Middle East, Africa, Southheast Asia, wdg. Nkwupụta ahụ pụrụ iche mezuru mkpa nke ndị ahịa nwere nrụpụta dị elu, nchekwa, ịma mma na ntinye.
Ndị Hangtong nọ na-agbasi mbọ ike maka onye ahịa ọhụụ ọ bụla ma ghara ịnapụ onye enyi ọ bụla ochie ihe karịrị afọ 10. Ntụkwasị obi na - amalite mgbe niile site na njikọta na afọ ojuju na - egosikwa mgbe ọrụ izizi gasịrị. Ezi agwa na abamuru nke ibe anyị bụ ntọala mmekọrịta anyị na-adịru mgbe ebighi ebi. Ndị Hangtong ga-agbasi mbọ ike maka ọdịnihu anyị nke ọma.